ထုတ်ကုန်များ > 5-Chloroindole (17422-32-1)
CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 5-Chloroindole (17422-32-1) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ် synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
5-Chloroindole (17422-32-1) ကဗီဒီယို
5-Chloroindole 5-chloro-3-indole-N n- dimethylglyoxalamide နှင့် 5-chloro-N N-dimethyltryptamine များ၏ပေါင်းစပ်ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာ (Escherichia coli Pseudomonas SP ကနေခွဲထုတ် multicomponent ဖင်နိုလစ် hydroxylase (MPH) ဖော်ပြ။ KL33 နှင့် KL28 strains) biocatalysts ၏ရှေ့တော်၌ dyestuffs များ၏ပေါင်းစပ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
5-Chloroindole Polygonum tinctorium များ၏တစ်သျှူးယဉ်ကျေးမှုအတွက်အနကျအဓိပ်ပါယျ indican မှအစားထိုး indoles ၏ biotransformation လေ့လာဖို့အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသိသိ trimer နှင့်ဆက်နွယ်နေသိသိ trimer (ပေါ်လီမာ) ၏ချည်နှောင်တက်လုပ် redox-တက်ကြွရုပ်ရှင်၏ပြင်ဆင်မှုအတွက် monomer အဖြစ်အသုံးချနိုင်ပါသည်။
5-Chloroindole ဓါတ်ကူပစ္စည်း စတင်. အဖြစ် 3-chlorobenzaldehyde အသုံးပြု. ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
5-Chloroindole တစ် 5-အစားထိုး indole ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသိသိ trimer နှင့်ဆက်နွယ်နေသိသိ trimer (ပေါ်လီမာ) ၏ချည်နှောင်ခြင်းကိုပါဝင်သည်ဟုတစ် redox-တက်ကြွရုပ်ရှင်ဖွဲ့စည်းရန် electropolymerization ခြင်းကိုသည်းခံ။ ဒါဟာ 5-HT3 အဲဒီ receptor ၏အလားအလာအပြုသဘော allosteric modulator တွေကို (Pam) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအက်ဆစ်ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာကြေးနီဖျက်သိမ်း၏အားကြီးသော inhibitor အဖြစ်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ 1N အတွက်ပျော့သံမဏိချေး inhibitor ထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ် deaerated ကြောင့်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ indoline ၏နိုက်ထရိတ်ကနေတဆင့် 5-chloroindole ၏ပေါင်းစပ်, ဖော်ပြထားခဲ့သည်။
အဆိုပါ anticancer indoles ပြင်ဆင်ထားရန်, အစားထိုး heteroannulated indole အနကျအဓိပ်ပါယျတစ်စီးရီးဖန်တီးခြင်းနှင့်ရောင်စဉ်တန်းများနှင့်ကို elemental ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့ MTT assay သုံးပြီးသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ (HeLa) ဆဲလ်လိုင်းဆန့်ကျင် anticancer လှုပ်ရှားမှုအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ စံ cisplatin (IC5-5 μM) မှနီးဖြစ်သောအသီးသီး 50 နှင့် 13.41 μM၏ IC14.67 တန်ဖိုးဒြပ်ပေါင်းများ 50c နှင့် 13.20d ပြပွဲအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လှုပ်ရှားမှု။ လူအားလုံးတို့သည်ဒြပ်ပေါင်းများထပ်မံသူတို့ရဲ့ selection အကဲဖြတ်ရန်ငါးဂရမ်အနုတ်လက္ခဏာနှစ်ခုဂရမ်အပြုသဘောဘက်တီးရီးယားပိုးတဘက်၌သူတို့ antibacterial လှုပ်ရှားမှုအတွက်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစည်းနှောင် mode သို့ပိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်ရ binding ဆှဖှေဲ့ inhibitors ရန်အလို့ငှာ, ဒြပ်ပေါင်းများ (4a-5d) လူ့ပရိုတိန်း kinase CK2 နှင့်အတူဆိုက်ကပ်ခဲ့သည်။ (အသီးသီး, E-မော်ဒယ်ရမှတ် = -2 နှင့် -4: သွားလာရမှတ် = -5 နှင့် -7.011 6.974c နှင့် 50.6c) ရလဒ်များလူ့ပရိုတိန်း kinase CK50.865 ၏စည်းနှောင်အိတ်ကပ်ထဲတွင် hydrophobic interaction ကအများဆုံးကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲ binding ligands ၏ဆှဖှေဲ့အမြတ်ထုတ်ကြောင်းအကြံပြု ။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံမှာ-လှုပ်ရှားမှုဆက်ဆံရေးမျိုး (SAR) လေ့လာမှုများအများဆုံးဖြစ်ပွားဒြပ်ပေါင်းများ (5c, 5d) သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုကုသအတိအကျလုပ်နိုင်စွမ်းသို့တီထွင်နိုင်သရုပ်ပြခဲ့သည်။
5-Chloroindole (17422-32-1) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
MDL အရေအတွက် MFCD00005672
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း 5-Chloroindole; 5-Chloro-1H-indole; 1H-Indole, 5-chloro-; 5-Chloro indole;
assay ရာခိုင်နှုန်း Range 98-100%
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 151.593 g / mol
အပြုံး C1 = CC2 = ကို C (ကို C = CN2) ကို C = C1Cl
အရည်ပျော်မှတ် 69.0-73.0 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
5-Chloroindole (17422-32-1) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
5-Chloroindole (17422-32-1) ဆောင်းပါးများ
5-Chloroindole: အ 5-HT₃အဲဒီ receptor ၏အစွမ်းထက် allosteric modulator တွေကို။
မေီ S ကို Newman က et ။ အယ်လ်
anodic ဖျက်သိမ်းနှင့်အက်ဆစ်ကလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာကြေးနီ cathode deposition ၏ inhibitors အဖြစ် Indole နှင့် 5-chloroindole ။
Scendo M က, et al ။ ဂျေ Apple က။
5-အမိုင်နို-နှင့် 5-chloro-indole 1 N ကိုဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်ထဲမှာပျော့သံမဏိချေး inhibitors အဖြစ်။
et al Moretti က G ။
5-Chloroindole (17422-32-1) နည်းပညာပိုင်းဝန်ဆောင်မှု:
5-Chloroindole (17422-32-1) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 5-Chloroindole (17422-32-1)
Apicmo.com မှာ, ငါတို့သည် synthesize ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် 5-Chloroindole (17422-32-1) ၏အမြောက်အမြားမှသေးငယ်တဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများအောက်တွင်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်တင်းကြပ်သောလိုက်နာမှုနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်။
5-17422-32: 1-Chloroindole သည့် CAS အဘယ်သူမျှမနှင့်အတူ indentified ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ဓာတုနာမကိုအမှီ 5-Chloroindole ဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏ Molecular ဖော်မြူလာ C8H6ClN ဖြစ်ပါတယ်။ Chloroindole 5-chloro-N N-dimethyltryptamine နှင့် 5-chloro-3-indole-N n- dimethylglyoxalamide များ၏ပေါင်းစပ်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာ (Escherichia coli Pseudomonas SP ကနေခွဲထုတ် multicomponent ဖင်နိုလစ် hydroxylase (MPH) ဖော်ပြ။ KL28 နှင့် KL33 strains) biocatalysts ၏ရှေ့တော်၌ dyestuffs များ၏ပေါင်းစပ်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
5-Chloroindole ကိုလည်း Polygonum tinctorium ရဲ့တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုအတွက်အနကျအဓိပ်ပါယျ indican မှအစားထိုး indoles ၏ biotransformation လေ့လာဖို့အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာနှင့်ဆက်စပ်သိသိ trimer (ပေါ်လီမာ) နှင့်သိသိ trimer ၏ချည်နှောင်တက်လုပ် redox-တက်ကြွရုပ်ရှင်၏ပေါင်းစပ်အတွက် monomer အဖြစ် udes နိုင်ပါတယ်။
5-Chloroindole ဓါတ်ကူပစ္စည်း စတင်. အဖြစ် 3-chlorobenzaldehyde အသုံးပြု. ကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
5-Chloroindole တစ် 5-အစားထိုး indole ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သိသိ trimer (ပေါ်လီမာ) နှင့်သိသိ trimer ၏ချည်နှောင်ခြင်းကိုပါဝင်သည်ဟုတစ် redox-တက်ကြွရုပ်ရှင်ဖွဲ့စည်း electropolymerization ခြင်းကိုသည်းခံ။ ဒါဟာ 5-HT3 အဲဒီ receptor ၏အလားအလာ Pam (အပြုသဘော allosteric modulator တွေကို) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအက်ဆစ်ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာကြေးနီဖျက်သိမ်းတဲ့အစွမ်းထက် inhibitor အဖြစ်သက်သေပြလျက်ရှိသည်။ 1N အတွက်ပျော့သံမဏိချေး inhibitor ထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ် deaerated ကြောင့်သက်သေပြလျက်ရှိသည်။ indoline ၏နိုက်ထရိတ်မှတဆင့် 5-chloroindole ၏ပြင်ဆင်မှု, ကရှင်းပြသည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ anticancer indoles synthesize စေရန်, အစားထိုး heteroannulated indole အနကျအဓိပ်ပါယျကို elemental နှင့်ရောင်စဉ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်ဖန်တီးနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာထို့နောက်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအပေါ် anticancer အရေးယူဘို့ MTT assay သုံးပြီး (HeLa) ဆဲလ်လိုင်းအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းများမှာ 5d နှင့် 5c ပုံမှန် cisplatin (IC50-14.67 μM) အားလုနီးသည်ကိုအသီးသီး 13.41 နှင့် 50 μM၏ IC13.20 တန်ဖိုးအကြီးလှုပ်ရှားမှု, ပြသထားတယ်။ ဒြပ်ပေါင်းများထို့နောက်5တဘက်၌သူတို့ antibacterial လှုပ်ရှားမှုအတွက်ပြခဲ့ကြသူတို့ရဲ့ selection ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အနှုတ်လက္ခဏာနှင့်2ဂရမ်အပြုသဘောဘက်တီးရီးယားပိုးဂရမ်။
အဆိုပါ inhibitor စည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့နှင့် binding mode သို့ပိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်ရရန်, ဒြပ်ပေါင်းများ (4a-5d) လူ့ပရိုတိန်း kinase CK2 နှင့်အတူဆိုက်ကပ်ခဲ့သည်။ သွားလာရမှတ် = -2 နှင့် -4:, E-မော်ဒယ်ရမှတ် = -5 နှင့် -7.011 ရလဒ်များလူ့ပရိုတိန်း kinase CK6.974 ၏စည်းနှောင်အိတ်ကပ်ထဲတွင် hydrophobic interaction ကအများဆုံးကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲ binding ligands (50.6c နှင့် 50.865c ၏ဆှဖှေဲ့၏အားသာချက်ကိုယူကြောင်းပြသ အသီးသီး) ။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံမှာ-လှုပ်ရှားမှုဆက်ဆံရေးမျိုး (SAR) လေ့လာမှုများအများဆုံးဖြစ်ပွားဒြပ်ပေါင်းများ (5c, 5d) သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကင်ဆာရောဂါကုသနိုင်ရန်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူတိကျသောဒြပ်ပေါင်းများသို့တီထွင်နိုင်ပြသခဲ့သည်။
5-Chloroindole (17422-32-1) နာမ်
5-Chloroindole လည်း Chloroindole သို့မဟုတ် 6-Chloroindole99% သို့မဟုတ် 5-Chloroindole99% သို့မဟုတ် 5-Chloroindole 98% သို့မဟုတ် 5-Chloro-1h-Indole သို့မဟုတ် 1h-Indole, 5-Chloro- သို့မဟုတ် 5-Chloroindole, 98% သို့မဟုတ်5အဖြစ်လူသိများသည် -Chloroindole (5cli) သို့မဟုတ် 5-Chloro-1h-Indole 98% ။
5-Chloroindole (17422-32-1) တွက်ချက်ဂုဏ်သတ္တိများ
အတိအကျ Mass 151.019 g / mol
Monoisotopic Mass 151.019 g / mol
Topological အရောင်အသွေးစုံ Surface ကဧရိယာ 15.8 တစ် ^ 2
မော်လီကျူးအလေးချိန် 151.593 g / mol
5-Chloroindole (17422-32-1) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
5-chloroindole.They features အသစ်တွေလည်းပါဝင်ကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာရန်လိုက်နာသင့်ကြောင်းအတော်ကြာကြိုတင်ကာကွယ်ရေးရှိပါတယ်:
ဒါကြောင့်အသုံးပြုတဲ့အခါသင်သည်မည်သည့်အငွေ့, ရေမှုန်ရေမွှား, ဖုန်မှုန့်, အငွေ့, သဘာဝဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်အခိုးအငွေ့ကိုရှူရှိုက်သင့်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့အရေပြား, မျက်စိနှင့်မကျြနှာကိုကာကှယျပေးဖို့အကာအကွယ်ဂီယာအပေါ်ထားပါ။ သင်သည်သင်၏မျက်စိကာကွယ်ပေးရန်, သင်၏လက်ကိုကာကွယ်ရန်သင်၏မျက်နှာကိုနှင့်အထူးမှန်ဘီလူးအဘို့မျက်နှာမျက်နှာဖုံးများလက်အိတ်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
-You နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာ 5-chloroindole သုံးပြီးပြီးနောက်သင်၏လက်ကိုဆေးကြောသင့်ပါတယ်။
သငျသညျနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် 5-chloroindole ပွတ်တိုက်သင့်ရဲ့အသားအရေကို အသုံးပြု. ပြု -After ။
ရှိုက်လျှင်, သားကောင်လုံလောက်သောလတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေလည်းမရှိတဲ့နေရာဖယ်ရှားရမည်။ သားကောင်သူတို့ကိုချမ်းသာဖို့နဲ့မဆိုအခက်အခဲများမရှိဘဲရှူဖို့အတှကျလှယျကူသောအနေအထားတွင်ရှိသင့်ပါတယ်။
ကမဆိုရှေ့တော်၌ရရှိသွားတဲ့လျှင်, မျက်စိသုတ်ခြင်းနှင့်အစွမ်းကုန်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူ ရှင်းလင်း. ရေကိုအသုံးပြုပါ။ သင်သည်မည်သည့်မျက်ကပ်မှန်ခဲ့လျှင်, သူတို့သည်ချွတ်ယူရပါမည်။ ထိုအခါမျက်စိလက်မဆေးစောင့်ရှောက်လော့။
5-Chloroindole (17422-32-1) သိုလှောင်ရေး
5-Chloroindole (17422-32-1) ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ
5-chloroindole ပုံဆောင်ခဲအစိမ်းရောင်-အနည်းငယ်အဖြူမှ grayish ကြောင်းအမှုန့်သည်။
5-chloroindole atypical antipsychotic.5-chloroindole ၏အေးဂျင့်ကတော့ telencephalon နှင့် brainstem အတွက် serotonin ၏အဆင့်ဆင့်၏စိတ်ကျရောဂါအဖြစ်မှတျတမျးတငျထားတူသောအာရုံကြောတက်ကြွဖြစ်ကြောင်းဒြပ်ပေါင်းများကိုပြင်ဆင်နေသည့်အခါအသုံးပြုသည်တစ်ဦးအစားထိုးအိမ်ဖွဲ့ Indole ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ serotonin ၏အဆင့်ဆင့် depressing ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုပြသထားပါတယ်တဲ့ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
ဒါဟာအလွန်မြင့်မား vacuum.Th pictratefrom (* C80H100) ကို အသုံးပြု. ရေစက်သောအခါပြား glistening တူသော (40-60o ခ) ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အီအနေဖြင့်သို့မဟုတ် (6-6o ခ) recrystallises မီတာ 147o (146.5-147.5o) ဖြစ်လာသည်။
1 ။ 5-Chloroindole (17422-32-1) သဘာဝဘေးဖော်ထုတ်ခြင်း
5-chloroindole GHS.They အတွက်တံဆိပ်ထုတ်ပြန်ချက်များပါဝင်သည်ရာအချို့အန္တရာယ်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများကိုကောင်းစွာပေါ်မှာထည့်သွင်းဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်ကာကွယ်မှုထုတ်ပြန်ချက်များကို အသုံးပြု. ညွှန်ပြနေကြသည်သိရသည်။ တစ်ဦးက pictogram ထပ်မံရှင်းပြရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအစကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူပြီး၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုပြုလုပ်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့စကားလုံးတစ်လုံး signal ကိုအဖြစ်အသုံးပြုသတိပေးချက်, ပါဝင်သည်။
2 ။ (17422-32-1) သဘာဝဘေးဖော်ပြချက်
5-chloroindole အရေပြားနဲ့ရရှိသွားတဲ့ -If ကအသားအရေတခုတခုအပေါ်မှာမတည့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
5-chloroindole မျက်စိထဲမှာရရှိသွားတဲ့ -if အဲဒါကိုအတွက်အလေးအနက်ယားယံစေနိုင်ပါတယ်။
3 ။ 5-Chloroindole ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဖော်ပြချက်
ကကိုင်တွယ်ရသောအခါသင်၏လက်ကိုကာကွယ်ရန်အကာအကွယ်လက်အိတ် -Wear ။
သင်သည်သင်၏မျက်စိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အထူးမျက်မှန်ဝတ်ဆင် -Ensure ။
သင်၏မျက်နှာကိုကာကွယ်ပေးရန်မျက်နှာမျက်နှာဖုံး -Use ။
5-chloroindole သုံးပြီးပြီးနောက်အမြဲ0° C ၏အပူချိန်ထက်မပိုပါဘူးတဲ့အရပ်ဌာန၌သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။
4 ။ (17422-32-1) ရှေးဦးသူနာပြုဆောင်ရွက်ချက်များ
5-chloroindole ၏မျက်လုံးချင်းလည်းမရှိလျှင်သင်သားကောင်အပေါ်မည်သည့်မျက်စိအဆက်အသွယ်၏ရှေ့မှောက်တွင်စစ်ဆေးသင့်နှင့်လျင်မြန်စွာသူတို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အကြောင်းကိုတဆယ်မိနစ်ဖွင့်မျက်စိစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်သန့်ရှင်းသောရေကို run နှင့်အတူမျက်စိရှင်းလင်းရန်သွားရောက်လည်ပတ်မည်။ အသုံးပြုတဲ့ရေအေးမြစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကပထမဦးဆုံးအကူအညီကြိုတင်ကာကွယ်မှုသည်နှင့်ထို့ကြောင့်သားကောင်ထိုနောက်မှဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရှာခြင်းငှါသင့်ပါတယ်။
အရေပြားပေါ်တွင်မည်သည့်အဆက်အသွယ်လည်းမရှိလြှငျ, ရေပြေးတွေအများကြီးနဲ့အတူအရေပြားဆေးကြောပါ။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နဲ့ညင်ညင်သာသာရေကိုနေတုန်းပဲအပြေးနှင့်အသင်တို့သည်လည်း nonabrasive သောဆပ်ပြာကိုသုံးနိုင်သည်နှင့်အတူထိခိုက်ဧရိယာကို clean up ။ ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့ပြီးတော့ပျော့ပျောင်းစေရန်သုတ်သုံးပြီးဖုံးလွှမ်းစေနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းကြောင်းမဆိုအထည်ကအသုံးမပြုခင်ဆေးကြောသင့်သည်။ ဒီပထမဦးဆုံးအကူအညီအစီအမံရှိခြင်းပြီးနောက်သားကောင်ထို့နောက်မည်သည့်ဆေးဝါးအကူအညီရှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။
တဦးတည်း 5-chloroindole မျိုချမိပါပြီဆိုရင်, ထို့နောက်သားကောင်သောက်ရေသန့်ပေးထားရပါမည်။ သင်သည်မည်သည့်ပေးသောအချိန်တွင်အန်သွေးဆောင်မသငျ့သညျ။ သားကောင်ထို့နောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီကိုရှာသင့်ပါတယ်။
တစ်သားကောင် 5-chloroindole ရှိုက်လိုက်ပါတယ်ခွခွအေနမြေိုးတှငျ, သားကောင်ထိတွေ့မှု၏မြင်ကွင်းတစ်ခုကနေရွှေ့ပြောင်းရပါမည်နှင့်မရောနှောလတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေရရှိနိုင်ပါသည်နေရာခေါ်သွား။ သားကောင်အသက်ရှူအတွက်အခက်အခဲထားပါတယ် အကယ်. ၎င်းတို့၏အသက်ရှူကူညီမှအောက်စီဂျင်ကိုသုံးပါ။ ဒါဟာအပြီးဆေးဝါးအကူအညီရှာအကြံပြုလိုတယ်။
5 ။ ဆောင်ရွက်ချက်များ -Fighting မီး
အရက်, ခြောက်သွေ့တဲ့ဓာတုအမှုန့်, ပေါ်လီမာရေမြှုပ်သို့မဟုတ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့: ဤထုတ်ကုန်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးဆိုမီးလောင်မှု၏ရှေ့မှောက်တွင်ခုနှစ်တွင်ထို့နောက် extinguishing ၏အောက်ပါမီဒီယာကိုသုံးပါ။
သင်တို့သည်ဤမီးလောင်မှုတိုက်ခိုက်နေကြသောအခါ, သငျသညျမီးတိုက်ပွဲအချို့အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ကိုမဆိုမျက်စိသို့မဟုတ်အရေပြားအဆက်အသွယ်တားဆီးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပါရှိသောဖြစ်ကြောင်းအသက်ရှူယန္တရားရှိသည်ဖို့အကာအကွယ်အဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်။ ဤသည်ကိုသင်ထုတ်ကုန်များ၏ပြိုကွဲခြင်းနှင့်မီးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အခြားမည်သည့်အန္တရာယ်ရှိသောပေါက်ကွဲမှုကနေဖွဲ့စည်းခဲ့ပုံမှန်မဟုတ်သောမီးလောင်မှု, ထုတ်ကုန်များ၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဖြန့်ချိသောအဆိပ်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အငွေ့ကိုရှောင်ကြဉ်ကူညီပေးပါမည်။
6 ။ မတော်တဆဖြန့်ချိဆောင်ရွက်ချက်များ
မိုးသည်းထန်စွာရော်ဘာနှင့် impervious ဘွတ်ဖိနပ်, သင့်လျော်သောအသက်ရှူကိရိယာနှင့် impervious လက်အိတ်ဝတ်ဆင်။ ကိုစုပ်ယူသို့မဟုတ်တွေထက်တောင်ဆိုအစိုင်အခဲပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်သင့်လျော်သောကွန်တိန်နာထဲမှာထားလေ၏။ အဆိုပါယိုဖိတ်မှုဇုန်အထိဆေးကြောပါနှင့်ပစ်ကပ်ပြီးပါကပြီးလေခတ်။ ဤအကွန်တိန်နာသို့စုပ်ယူသို့မဟုတ်အစိုင်အခဲပစ္စည်းထားပါနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းသူတို့ကိုတက်ကိုပိတ်ပါ။
7 ။ 5-Chloroindole (17422-32-1) ကိုင်တွယ်မှုနှင့်သိုလှောင်
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤထုတ်ကုန်၏ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အဖြစ်ဝေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်သကဲ့သို့အပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးကြပြီမဟုတ်။ 5-chloroindole တစ်ခုတည်းကိုသာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသန၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
8 ။ 5-Chloroindole (17422-32-1) Exposure ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှု
မည်သည့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ကနေသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကာကှယျပေးဖို့လုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ကိုလည်းခံနိုင်ရည်ဓာတုနှင့်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန် wear ဘွတ်ဖိနပ်ကိုသုံးနေစဉ်။
9 ။ 5-Chloroindole (17422-32-1) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ
5-chloroindole ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်အစိုင်အခဲသည်။ 8-6 °နှင့် 69 တစ်ဦးမော်လီကျူးအလေးချိန်: ဒါဟာ c71H151.60CIN တစ်ဦးမော်လီကျူးဖော်မြူလာ, (ကို C) ​​၏အရည်ပျော်မှတ်ရှိပါတယ်။
10 ။ 5-Chloroindole တည်ငြိမ်ရေးနှင့် reactivity
ဒါဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့အခြေစိုက်စခန်းများနှင့်အက်ဆစ်င်တစ်ဦး product အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
နိုက်ထရိုဂျင်၏ -Nitrogen အောက်ဆိုဒ်
11 ။ 5-Chloroindole Toxicological သတင်းအချက်အလက်များ
ရှိုက်သို့မဟုတ်မျိုချမိပါလျှင်ဒီထုတ်ကုန်ဟာသားကောင်မှအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤသည်မှာပစ္စည်းများကတော့ချွဲအမြှေးပါးအဖြစ်ကောင်းစွာအထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုးကျိုးဖြစ်စေသည်။ အမြင်နှင့်အသိပညာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်အဆိုအရဒီထုတ်ကုန်ရဲ့ toxicological ဂုဏ်သတ္တိများစိတ်ပိုင်းဖြတ်သို့မဟုတ်အပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးကြပြီမဟုတ်။
12 ။ ဂေဟစနစ်သတင်းအချက်အလက်
မဆို၎င်း၏ mobility, degradation နှင့်ဇွဲနှင့် ပတ်သက်. ရရှိနိုင်ပါဒေတာ, တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအလားအလာသို့မဟုတ်သမျှကိုအခြားဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
13 ။ 5-Chloroindole (17422-32-1) ရှင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား
ဒေသခံသို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းများကတောင်းဆိုခဲ့သည်ဆိုလုပ်ရပ်များ၏မရှိခြင်း, သင်ရောနှောသို့မဟုတ်ပျော်ပစ္စည်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့သောအရည်ပျော်ပစ္စည်းသုံးပြီးနှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့် scrubber နှင့် burner ပြီးနောက်တပ်ဆင်ထားကြောင်းဓာတုမီးရှို့ဖျက်ဆီးထဲမှာမီးမရှို့သင့်ပါတယ်။
မည်သည့်ဥပဒေများကိုရှိမရှိဒေသခံ, ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်တည်ရှိနေလျှင်, သူတို့ကိုလိုက်နာ။
14 ။ (17422-32-1) ပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်
15 ။ 5-Chloroindole (17422-32-1) စည်းမျဉ်းပြန်ကြားရေး
16 ။ သည်အခြားသတင်းအချက်အလက်
5-Chloroindole (17422-32-1) နည်းပညာပိုင်းဝန်ဆောင်မှု
ကျနော်တို့အခြားသူတွေအကြားပစ္စည်းသိပ္ပံ, Chromatography, အသက်ရှင်ခြင်းကိုသိပ္ပံ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဓာတုပေါင်းစပ်အပါအဝင်အားလုံးသုတေသနနယ်ပယ်များတွင်ကြုံတွေ့ဖြစ်ကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။
5-Chloroindole (17422-32) အမြောက်အများအမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
သင်သည်သင်၏သုတေသန applications များ, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မည်သည့်အမြောက်အမြားလိုအပ်ပါသလား? ထို့နောက်အမိန့်နေရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖော်ရွေဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
5-အမိုင်နို5N ကိုဆာလဖျူ acid.Moretti, G အတွက်ပျော့သံမဏိချေး inhibitors အဖြစ် 1-chloro-indole ကတညျး, et al.Electrochimica Acta 41 (13), 1971-1980, (1996)
Sherman, အေဒီ et al ။ : Psychopharmacol ။ comm,2နှင့် 285 (1976) ။ ; လီ, ဒဗလျူ et al .: Adv ။ ဖျာ။ res ။ , 236, 2594 (2011)
Tryptamine အချို့သည် 5-နှင့် 6-Chloro, 5-methyl နှင့် 5, 6, 7-Trimethyl အနကျအဓိပ်ပါယျ၏ပေါင်းစပ်။ et al Benington F ကို။ အဆိုပါအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ 25 (9) ၏ဂျာနယ်, 1542-1547, (1960)
anodic ဖျက်သိမ်းနှင့်အက်ဆစ်ကလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာကြေးနီ cathode deposition ၏ inhibitors အဖြစ် Indole နှင့် 5-chloroindole ။ Scendo M က, et al ။ ဂျေ Apple က။ လြှပျစစျ။ 33 (3-4), 287-293, (2003)